အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဥရောပသည်ဒါအရေးကြီး Is? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဥရောပသည်ဒါအရေးကြီး Is?
မဟုတ်ရှည် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအပြီးအများအပြားဖွင့်လှစ်သည့် Eurostar ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းအဖြစ် 1994, ကခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်တဦးတည်းဟုအမည်ပေးထားသည့်ခံခဲ့ရ. မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုအရ, ကြောင်းခေါင်းစဉ်ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့ခဲ့သည်. ဒါဟာတို့တွင် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထား ဗိသုကာအံ့ဘွယ်သောအမှု အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အအုံနှင့် CN Tower တွင်တူသော.
အဆိုပါ Eurostar ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆက်ဆက်အံ့ဘွယ်သောနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏ကြီးမားသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဥရောပအဘို့ဤမျှလောက်အရေးပါသည်? ယင်း၏သက်ရောက်မှုဘာ, နှင့်ခရီးသွားများအတွက်ကြောင့် အသုံးပြု. ရသောမြို့ကြီးများရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်? အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဓိပ်ပာယျမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြပါစို့:
အဆိုပါ Eurostar ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏သမိုင်း
အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်စတင်သော်လည်း 1988, သောစိတ်ကူးသစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုမဆိုလိုပါ. တောင်မှနပိုလီယံ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူ toyed အင်္ဂလန်နှင့်ပြင်သစ်ကိုဆက်သွယ်ထားသော တစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကနေတဆင့်. သူ့ရှေ့မှာ, ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာအဲလ်ဘတ်က Mathieu-Favier ပထမဦးဆုံးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆိုပြုထား 1802. မိမိအ concept ကိုလမ်းတစ်လျှောက်တစ်ဦးအတုကျွန်းပါဝင်သည်, မြင်း-ပြောင်းလဲအဖြစ် ဘူတာရုံ. သို့သျောလညျး, အများဆုံးအစီအစဉ်များကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးသည်အထိစွန့်ပစ်ခဲ့ကြ.
တွင် 1987, ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်၏လွှတ်တော်များနောက်ဆုံးတွင် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့. ဝန်ဆောင်မှုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်ရထားလမ်းအသွားအလာနှင့်တဦးတည်းနှစ် - အဆိုပါစီမံကိန်းကိုသုံးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သည်. ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခြောက်နှစ်ကိုယူ, $7.2 ဘီလီယံအထိ, တကျိပ်တပါးသော Boring စက်တွေ, နှင့် 13,000 အလုပ်သမားများ. ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ဒီနေ့ရဲ့ညီမျှသည် $12 ဘီလီယံအထိ.
အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြစ်ပါသည် 31.35 မိုင်ရှည်လျားသော, တစ်ခုရေအောက်အပိုင်းနှင့်အတူ 23.5 မိုင်. ဒါဟာပြေးသောကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးကျယ်ပြန့် undersea အပိုင်းင် 250 ၎င်း၏နိမ့်ဆုံးအမှတ်မှာပင်လယ်အိပ်ရာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေ. အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းချိတ်ဆက် အင်္ဂလန်မှာ Folkestone Coquelles နှင့်အတူ, pas-de-Calais အတွက် ပြင်သစ်. ဒိုဗာ၏ရေလက်ကြားမှာအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားအောက်ဒါဟာပြေး.
အဘယ်အရာ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအထူးစေသည်ကြောင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်ပြည်မကြီးမှဥရောပ၏တစ်ခုတည်းသော connector ကိုဖြစ်ပါတယ်. နှင့်အတူ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား ယနေ့ရရှိနိုင်, င်း ပြည်မကြီးဥရောပဖို့ဗြိတိန်ကနေခရီးသွားလာရန်အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု.
အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၏သက်ရောက်မှု
အဆိုပါ Eurostar ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရထားလမ်းအောင်အတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍကစားထားပြီး လက်လှမ်းခရီးသွားလာ နောက်ထပ်တစ်ခါ. သူတို့ကအထူးသဖြင့်ဗြိတိန်၌လေးမြတ်, ကမပါဘဲဥရောပခရီးကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းအဖြစ် ပျံ. ဒါဟာခရီးသွားများအတွက်ခရီးသွားများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချကူညီပေးသည်, အဖြစ်ကသူတို့ရဲ့ကာဗွန်ခြေရာကို. Eurostar ရထားထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ပဲရစ်မှလန်ဒန်ကနေခရီးသွားလာကခန့်မှန်း 90% ဒီထက်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ လေယာဉ်ကိုယူပြီးထက်ထုတ်လွှတ်မှု.
အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုအဓိကရန်၎င်း၏ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်ပါသည် ဥရောပရထားလမ်းကွန်ရက်များ. ဒါဟာအသုံးပြုခြင်း, သငျသညျဗြိတိန်ကနေအများဆုံးအဓိကဥရောပမြို့ကြီးများမှရနိုင်. ထိုအဖွင့်ကတူဗြိတိန်ရဲ့အဓိကမြို့ကြီးများရောက်ရှိဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့မေ့လျော့တော်မပါစေ လန်ဒန် ပျံမပါဘဲ. ဒါဟာတစ်ဦးတတ်နိုင်င်, ခရီးသွားလာအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံလမ်း.
Lyon Highsped ရထားမှလန်ဒန်
အဆိုပါ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုသင်သဘောကျတာလိုလျှင်, တစ်ယူ စီးနင်း ကမှတဆင့်! အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုသာယာလှပမဖြစ်စေခြင်းငှါ,, သို့သော်၎င်း၏အယူခံဝင်သည်၎င်း၏အဆင်ပြေစေရန်အတွက်တည်ရှိသည်. သငျသညျ UK ရှိမြို့တမြို့မှသို့မဟုတ်ခရီးသွားလာရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် ယနေ့တွင်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/channel-tunnel-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများမှ / က de အဆိုပါ / ja ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
#Channeltunnel #traveleurope europetravel Eurostar eurotrip လန်ဒန် longtrainjourneys trainjourney Tranride ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelfrance